ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ ရွှေတို့အိမ်မှာဒီိလိုတဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ ရွှေတို့အိမ်မှာဒီိလိုတဲ့
ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ ရွှေတို့အိမ်မှာဒီိလိုတဲ့
Posted by Kyi Lwin on Mar 15, 2012 in Copy/Paste | 20 comments
By Orange Demo
ကျုပ်သေမလောက်ဒေါသထွက်တယ် ဟောဒါက ဗိုလ်ချု့ပ်ကြီးသန်းရွှေရဲ့ နေပြည်တော်က အိမ်အသစ်ဗျာ ဒါန်နီရယ် ပီဒါဆန် ဆိုတဲ့ သတင်းထောက် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ နေပြည်တော်ရောက်တုန်းခိုးရိုက်ထားတာတဲ့။ ကဲ မျက်ရည်ကျဖို့ ကောင်းလောက်အောင်ကို ဒေါသထွက်တယ်။ ကျုပ်တို့ ပြည်သူတွေဘ၀နဲ့နှိုင်းယှဉ်စမ်းပါ။ စစ်သားတွေဘာဖြစ်နေလဲ ဓါတ်ပုံတွေက သက်သေခံတယ်။
from 11 page
စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ စိန်စီသောလမ်းမှာ လျှောက် ရွှေပုံပေါ်မှာင်္စ ခဲ့ကြမှာပဲ ။ဒါပေမယ့်
ဆာဒန်ဟူစိန် ဘယ်လိုဇာတ်သိမ်းသွားရသလဲ။ ဘယ်လိုပဲဆိုစေ မသေခင်လည်း လူတောသူတောမတိုးရဲပဲ လောကကြီးထဲမှာ ရွှေပုံပေါ်ထိုင်ပြီး ထိတ်ထိတ်ပျာပျာနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုစောင့်နေကြရတဲ့အဖြစ်တွေကတော့ အာဏာရှင်တိုင်းမလွဲမသွေတွေ့ရမယ့်ကိစ္စရှောင်ပြေးလို့မရတဲ့နိဂုံး။
သူတို့အိမ်အသစ်ကဘာမှလည်းမရှိဘူး ။အဖြူရောင်ပဲမြင်ရတယ် (ဘာမှမမြင်ရဘူး)
တို့များလည်း ကော်ပီလုပ်ထည့်လိုက်တာလေ။ မပေါ်တာဘယ့်နှယ်လုပ်ရပါ့။ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်မှာကြည့်မလား။
ရွှေတို့အိမ်က ဘလိုင်းချီးဘဲ တော့….
ရွှေ့အိမ်က ဟယ်ရီပေါ်တာရဲ့ ကိုယ်ပျောက်ဝတ်ရုံခြုံထားပုံရတယ်။
ဒါမှ ဒို့မြန်မာတွေ ဘယ်လောက်ချမ်းသာမှန်း ကမ္ဘာသိမှာ…။
Please Give Facebook URL !
ဖော်ပြပါ ပုံများမှာ ဘောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး ရှရွှတ်ခန် ၏ နေအိမ်ပုံ ဖြစ်ပြီး ၄င်းထဲမှ ပုံတစ်ပုံကို
အစိုးရ အတိုက်အခံများမှ ကူးယူကာ ဗိုလ်ချူပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ယခု ဦးသန်းရွှေ၏ နေအိမ်ဟု ဆိုကာ
ပုံမှား ရိုက်ကာ ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသေချာ..သူတို့ကတော့ ဒီလိုပြောတာဘဲ ..ကိုယ်မှမရောက်ဖူးတော့…ယ
ဒါက ရှရွတ်ခန်းရဲ့အိမ် ပုံတွေပါ
တို့တော့ယုံချင်တယ်၊ တို့ ဘဘညွန့်တယောက်လူတောထဲပြန်ရောက်တုန်းက မမ ကန်တော့တဲ့ပုံထဲမှာပါတာပဲကြည့်တော့။ဘဘညွန့်တောင်ဒီလိုနေနိုင်ရင် တို့ရွှေရွှေက သူ့ထက်သာသပေါ့လို့။
ဟယ်အဲဒါရှရွတ်ခန်အိမ်ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်လောက်ကတဲ့က အင်တာနက်မှာပေါ်နေတာ။ ဦးသန်းရွှေအိမ်မဟုတ်ပါဘူး။
ဘာတွေကအမှန်လဲ သေချာလည်းမသိတော့ပါဘူး ဟုတ်ချင်တာသာဟုတ်ကျတော့ ဖတ်တော့ဖတ်ရတယ် ပုံလည်းမကြည့်ရဘူ fbမှာဘဲသွားရှာတော့မယ်
အဲဒီအိမ် နဲ့ အခင်းအကျင်း အားလုံး က တကမ္ဘာလုံး မှာရှိတဲ့ ချစား သော အမည်ပျက် ” နိုင်ငံ့ သမ္မတ တွေ၊ အကြီး အကဲ တွေ” ရဲ့ အိမ် ဆိုပြီး အင်တာနက် ဓာတ်ပုံ အနေနဲ့ ပြန့်ပါတယ်။
အာဖရိက က ဇင်ဘာဘွေ သမ္မတ ပိုင်တာ ဆိုပြီး စခဲ့တာပါ။ နောက်ပိုင်း တစ်ခြားနိုင်ငံ များ ကပါ ယူ သုံးတာ ထင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ အဲဒီ ပုံတွေဟာ အမေရိကန် LA က Bel Air Section ခေါ်တဲ့ ရုပ်ရှင် စတူဒီယို က ပုံတွေလို့ ဆိုပါတယ်။
အင်တာနက် ထဲ က သတင်းတွေ၊ ဓာတ်ပုံ တွေဟာ ဟာ မှန်တာ ရှိသလို မှားတာ လုပ်ကြံ ဖန်တီး ထားတာ တွေ လဲ အများကြီးဆိုတာ သိထားကြသင့်ပါတယ်။
အရီးလတ်တို့ကတော့ စုံပါ့ဗျာ ..
သများလည်း အရီးလတ်လိုသိအောင် မနည်းဖျစ်ညှစ်လိုက်ဦးမယ် ..
အင့် .. အင့် .. အီး .. အား .. ဖွတ် ..
အရီး အလုပ်က အင်တာနက်ပေါ်မှာ တစ်ချိန်လုံး ထိုင်နေရလို့ပါဟေ့။
အင်တာနက်ပေါ်မှာ အချိန်ပြည့်ဝင်နေနိုင်ရင် မင်းလဲ အများကြီး စာတွေ ဖတ်ဖြစ်မှာပါဟေ့။
တကယ်တော့ အရီး မသိတာတွေ လဲ အများကြီးမှ အများကြီးပါ ဟေ့။ ;-)
ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး အားလုံးအဆင်ပြောသွားပြီလေခု